COVID-19 ကူးစကျခံထားရတဲ့ခရီးသညျနဲ့ လယောဉျအတူစီးမိလို့ quarantine လုပျနကွေရတဲ့ Team Aster – Gaming Noodle
COVID-19 ကူးစကျခံထားရတဲ့ခရီးသညျနဲ့ လယောဉျအတူစီးမိလို့ quarantine လုပျနကွေရတဲ့ Team Aster
ယခုလကျရှိ DPC season အတှငျးက တတိယမွောကျ Minor ကို အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ Team Aster ဟာ ပွိုငျပှဲအပွီးထဲက ကံဆိုးမှုမြားကို ကွုံတှနေ့ကွေရပါတယျ။ Team Aster အသငျးသားမြားဟာ LA Major ကို ရှဆေို့ငျးလိုကျကွောငျး မကွညောရသေးမီက လော့ဈအိနျဂလြိဈမွို့ကို သှားရောကျပွီး ပွိုငျပှဲဝငျနိုငျဖို့ အမရေိကနျဗီဇာအခကျအခဲမြားကိုရငျဆိုငျခဲ့ကွရသလို Minor ပှဲကနေ အိမျအပွနျခရီးမှာလညျး မြှျောလငျ့မထားတဲ့ဖွဈရပျတဈခုနဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ကွရပါတယျ။
အဲဒါကတော့ Team Aster အသငျးသားမြား လိုကျပါစီးနငျးလာခဲ့တဲ့လယောဉျပျေါက ခရီးသညျတဈဦးမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိနခေဲ့တာပါ။ ဒါကွောငျ့ တရုတျအစိုးရဟာ လယောဉျပျေါမှာလိုကျပါလာခဲ့တဲ့ ChYuaN, Xxs, BoBoKa နဲ့ Fade တို့ ၄ ယောကျကို အကွောငျးကွားပွီးနောကျ quarantine လာရောကျပွုလုပျဖို့အတှကျ ချေါယူခဲ့ပါတယျ။
Fade ရဲ့ Weibo ပို့ဈအရတော့ ကူးစကျခံထားရတဲ့ ခရီးသညျဟာ Team Aster အသငျးသားမြားနဲ့ ခုံ ၃ တနျးခနျ့သာ ကှာဝေးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Fade က Team Aster အသငျးသား ၄ ယောကျဟာ အိမျအပွနျခရီးမှာ ဖငျလနျနိုငျငံကနေ လယောဉျစီးလာခဲ့ကွပမေယျ့ အခွား Team Aster အသငျးသားတဈဦးဖွဈတဲ့ Sccc ကတော့ ဂြာမနီဘကျကနေ မတူညီတဲ့လယောဉျကို စီးလာခဲ့လို့ quarantine လုပျစရာ မလိုအပျကွောငျး ကိုလညျး ရေးသားထားခဲ့ပါတယျ။
ဒီအကွောငျးကို ChYuan ကလညျး တှဈတာပျေါမှာ ရေးသားထားခဲ့ပါတယျ။ ChYuan ရဲ့ ရေးသားခကျြအတှငျးမှာတော့ သူတို့ကို တရုတျအစိုးရက quarantine စငျတာမှာ သီးခွားခှဲပွီး နထေိုငျစမှောဖွဈကွောငျး၊ ဒါပမေယျ့ သူတို့ ၄ ယောကျလုံးဟာ တရုတျနိုငျငံကို ပွနျရောကျစဉျတညျးက home quarantine ပွုလုပျထားခဲ့ကွတဲ့အတှကျ စငျတာမှာ ၁၄ ရကျနစေရာမလိုတော့ပဲ မတျလ ၂၉ ရကျနအေ့ထိသာ ကွာမွငျ့မှာဖွဈကွောငျး အစရှိသဖွငျ့ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
We were informed by government officials that someone on our flight back from Finland has been tested positive for COVID-19. All4of us except SCCC will be under quarantined inadesignated centre in isolation.
— ChYuaN (@ChYuaNDota2) March 24, 2020
ဒါကွောငျ့ Team Aster ဟာ ဧပွီလ ၁ ရကျနမှေ့ာ စတငျကငျြးပမယျ့ တရုတျ Dota2League ကို ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျနိုငျဖို့ အလားအလာမြားလှပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ Team Aster အသငျးရဲ့ ပရိသတျမြားရော Dota2အသိုငျးအဝိုငျးတဈခုလုံးကပါ Team Aster အသငျးသားမြား ရောဂါကူးစကျခံရခွငျး မရှိနစေဖေို့အတှကျ မြှျောလငျ့လြှကျရှိကွပါတော့တယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျတငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
COVID-19 ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခရီးသည်နဲ့ လေယာဉ်အတူစီးမိလို့ quarantine လုပ်နေကြရတဲ့ Team Aster
ယခုလက်ရှိ DPC season အတွင်းက တတိယမြောက် Minor ကို အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ Team Aster ဟာ ပြိုင်ပွဲအပြီးထဲက ကံဆိုးမှုများကို ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ Team Aster အသင်းသားများဟာ LA Major ကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း မကြေညာရသေးမီက လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့ကို သွားရောက်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ အမေရိကန်ဗီဇာအခက်အခဲများကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသလို Minor ပွဲကနေ အိမ်အပြန်ခရီးမှာလည်း မျှော်လင့်မထားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။
အဲဒါကတော့ Team Aster အသင်းသားများ လိုက်ပါစီးနင်းလာခဲ့တဲ့လေယာဉ်ပေါ်က ခရီးသည်တစ်ဦးမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိနေခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် တရုတ်အစိုးရဟာ လေယာဉ်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာခဲ့တဲ့ ChYuaN, Xxs, BoBoKa နဲ့ Fade တို့ ၄ ယောက်ကို အကြောင်းကြားပြီးနောက် quarantine လာရောက်ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။
Fade ရဲ့ Weibo ပို့စ်အရတော့ ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ခရီးသည်ဟာ Team Aster အသင်းသားများနဲ့ ခုံ ၃ တန်းခန့်သာ ကွာဝေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Fade က Team Aster အသင်းသား ၄ ယောက်ဟာ အိမ်အပြန်ခရီးမှာ ဖင်လန်နိုင်ငံကနေ လေယာဉ်စီးလာခဲ့ကြပေမယ့် အခြား Team Aster အသင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Sccc ကတော့ ဂျာမနီဘက်ကနေ မတူညီတဲ့လေယာဉ်ကို စီးလာခဲ့လို့ quarantine လုပ်စရာ မလိုအပ်ကြောင်း ကိုလည်း ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို ChYuan ကလည်း တွစ်တာပေါ်မှာ ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ ChYuan ရဲ့ ရေးသားချက်အတွင်းမှာတော့ သူတို့ကို တရုတ်အစိုးရက quarantine စင်တာမှာ သီးခြားခွဲပြီး နေထိုင်စေမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ ၄ ယောက်လုံးဟာ တရုတ်နိုင်ငံကို ပြန်ရောက်စဉ်တည်းက home quarantine ပြုလုပ်ထားခဲ့ကြတဲ့အတွက် စင်တာမှာ ၁၄ ရက်နေစရာမလိုတော့ပဲ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့အထိသာ ကြာမြင့်မှာဖြစ်ကြောင်း အစရှိသဖြင့် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Team Aster ဟာ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှာ စတင်ကျင်းပမယ့် တရုတ် Dota2League ကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ အလားအလာများလှပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ Team Aster အသင်းရဲ့ ပရိသတ်များရော Dota2အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကပါ Team Aster အသင်းသားများ ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်း မရှိနေစေဖို့အတွက် မျှော်လင့်လျှက်ရှိကြပါတော့တယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။